Isitatimende sephephandaba Ngu FEELM Ukuphatha 20-11-19 Shiya amazwana
Isimo sengqondo esisemthethweni ngokusetshenziswa kwe-vaping ne-nicotine ngokujwayelekile kwehluka kakhulu. E-United Kingdom, ukuphefumula kuyakhuthazwa yizinhlangano zikahulumeni zezempilo. Ngoba ukubhema kudala umthwalo obizayo kwiNational Health Service yase-UK, izwe limele ukonga imali uma ababhemayo beshintshela ku-e-cigaretti esikhundleni salokho. Iningi lamanye amazwe nawo wonke ...
Ukuvota Izintela e-United States nakuwo wonke umhlaba
Isitatimende sephephandaba Ngu FEELM Ukuphatha 20-10-15 Shiya amazwana
Njengoba i-vaping ikhula ekuthandeni, iba yisisulu semvelo kohulumeni abadinga imali yentela. Ngenxa yokuthi imikhiqizo yomhwamuko ivame ukuthengwa ababhemayo nababhemayo, abaphathi bezentela bacabanga ngokufanele ukuthi imali esetshenziswe ku-e-cigarettes yimali engasetshenziswanga kubakhiqizi bakagwayi bendabuko. Ohulumeni bathembele kusikilidi nokunye ...
I-India: AbakwaVapers Bazovimbela Ukuvalwa Ngomhlaka 18th Anniversary
Isitatimende sephephandaba Ngu FEELM Ukuphatha 20-09-10 Shiya amazwana
Abameli be-Indian vaping bazobamba imibhikisho ngasikhathi sinye ezweni lonke ngoLwesihlanu, ngo-Septhemba 18, ukugubha unyaka owodwa kusukela uhulumeni waseNdiya wavimbela ukuthengiswa kwemikhiqizo evuthayo. Lo mcimbi uhlelwa yi-Association of Vapers India (AVI). “Sihlanganisa ama-vapers ndawonye ukuze siphakamise ukuphikisana kwethu nokuvinjelwa okwenziwe yi-gove ...
Ukuvota Kwentsha Kwehle ngama-29% ngo-2020, Imibukiso ye-CDC Survey
Isitatimende sephephandaba Ngu FEELM Ukuphatha 20-08-23 Shiya amazwana
Imiphumela emisha yocwaningo ekhishwe yi-CDC ikhombisa ukwehla kwamaphesenti ama-29 kwentsha ephuma ku-2019 kuya ku-2020, ikuletha emazingeni okugcina ukubonwa ngaphambi kuka-2018. Impela, iCDC neFDA bakhethe enye indlela yokwethula imiphumela. Imiphumela ekhethiwe (kodwa hhayi idatha abavela kuyo) beyingxenye yombiko we-CDC oshicilelwe ngo-Septhemba 9 — ngalo lolo suku okwakungu ...
Ukubhema Okuhlukile, Ugwayi Wokushisa, I-Epen, I-E Cigarette Blister Pack, Ugwayi we-E Liquid Vapor, Ugwayi waseNewport E,